Ukunika amandla iPython eGeany | Kusuka kuLinux
Lokhu okuthunyelwe kuhlukaniswe izingxenye ezimbili, okokuqala okuyisisekelo: static ikhodi isheke, bese kuba inkambo enkulu: ukuqedela ngokuzenzakalela kwePython.
1 Ukuhlolwa kwekhodi ye-Static
2 Ukuqedela ngokuzenzakalela kwePython
Ukuhlolwa kwekhodi ye-Static
Izolo ebusuku ngemuva kokuhlela kancane eSunshine ngiqale ukudlala nge-plugin ukunweba UGeany con Lua, bese kuthi emaminithini ama-5 bengivele nginayo i-plugin ebhaliwe engenze ngabheka ikhodi ku-Python naku-CoffeeScript, ekhomba amaphutha angasetshenziswanga nokungeniswa kwempahla ezweni, okuwusizo kakhulu lapho usebenza ngokujaha ukuthola amaphutha angenangqondo acashe emehlweni abonakalayo.
Ukufeza lokhu, kufakiwe amaphuphu, isihloli esimile se- Python, coffescript, umhlanganisi walolo limi, kanye ne-plugin ukunweba UGeany en Lua.
Ifayela le- Python futhi siya "Yakha" »" Setha imiyalo yokwakha "; kufakwa kukhetho lokuqala, lapho ithi "Hlanganisa" kulotshiwe:
nasenkhulumeni ejwayelekile ukuthola amaphutha owafakile:
Ngakho-ke lapho unefayela evulekile Python futhi ucindezelwe F8 isheke eli-tuli liyenziwa, likhombisa amaphutha akulo.
Ukufeza okufanayo nge IkhofiScript, isheke eliqinile nokuhlanganiswa, kuvulwa ifayela .ikhofi futhi kufakwa kwimiyalo yokwakha:
Ukwenza ngokuzenzakalela le miyalo yokuhlanganiswa njalo lapho ifayili ligcinwa futhi singakhohlwa ukucindezela u-F8, kopisha ifayela eliqukethe lapha kufolda yakho siqu "~ / .config / geany / plugins / geanylua / events", uma leso sakhiwo senkomba singekho: sakha.
Ngakho-ke njalo lapho ngigcina ifayela ku- Python o IkhofiScript lokhu kuhlolwe ngokwezibalo.
Ukuqedela ngokuzenzakalela kwePython
Elinye ithoyizi engangilenza yile i-plugin evumela ukuthi kube nokuqedela okuzenzakalelayo okuqhathaniswa nokwenziwe nge-plugin ye-Eclipse PyDev, kepha ngejubane nokukhanya kweGeany.
Faka indophi, umtapo wolwazi wokuphinda usebenzise ikhodi nokuhlaziya:
Vula amafayela aqukethe lapha kufolda "~ / .config / geany / plugins /" bese uvula izinketho zesinqamuleli sekhibhodi "Hlela" »" Okuncamelayo "» "Izinhlanganisela" bese ubheka ukungena "Python ukuqeda ”bese uyinika inhlanganisela yokhiye oziqedele " isikhala ", ungesabi uma ishayisana nokuqedela okuzenzakalelayo, bhala ngaphezulu inhlanganisela ngaphandle kokwesaba, uma ifayili lapho kuqedwa khona ukuqedela okuzenzakalelayo lingaveli Python isenzo sokuqedela okuzenzakalelayo somhleli sizokwenziwa.
Ngale ndlela kufanele ube usuvele une-autocomplete ehloniphekile eGeany.
Ngicabanga ngobuqotho ukuthi le plugin ilungele izindawo ezikhanyayo futhi ivalelisa i-Eclipse, i-NetBeans, i-KomodoEdit, ne-Nice SublimeText. Ngale plugin ungaba namandla wabahleli abakhulu kwiGeany encane nelula.
Uma kwenzeka i- "configuradera" inzima kakhulu noma inzima, mane usebenzise ukusetha kwami ​​kweGeany. Gcina ifolda yakho "~ .config / geany", uma kungenzeka, bese uvule ukucushwa okusha lapho; ukufaka:
futhi uzoba nomhleli wakho olungele ukuhamba.
Ngiyethemba uyayijabulela kakhulu futhi ungazise ngemibono yakho ngokusungulwa kwalokhu… hehehe….
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Inika amandla iPython eGeany
Kuhle kakhulu! Ngiya «ibhukumaka» ukuyivivinya kamuva later
Siyabonga ngomnikelo nangekhwalithi yaseCuba 😉
I-Eddy Ernesto del Valle Pino (xigurat) kusho
Ngingumbhali wokuthunyelwe kwangempela futhi nguyena owenza i-plugin.
Leyo timu iyikhohlwa ye-geany.
Njengamanje, i-masters.uci.cu iphansi kepha lapho ezinqolobaneni ze-git kubanjwa i-repo enokulungiswa kwe-geany njengoba ngiyisebenzisa.
Phendula u-Eddy Ernesto del Valle Pino (xigurat)
Ngiyabonga kakhulu, iqiniso ukuthi ngiyithanda kakhulu kunengqikithi eza ngokuzenzakalela.
Umnikelo omuhle kakhulu. Ngendlela, iyiphi ingqikithi leyo ebonakala ezithombeni ze-geany?
UDaniel G. kusho
Angikuboni ukungena kokuphothulwa kwe-python ku-Combinations, ngikopishe yonke ifolda yokumisa ngafaka amaphakheji njengoba isigaba Sokuphetha seposi sithi says
Phendula uDaniel G.
Ngivele sengikutholile ebengilahlekile ukukwenza, kokuncamelayo kwe-Plugin, kufanele unike amandla i-Lua plugin ne-voila 😛
Ngikhohliwe ukusho ukuthi iLua kufanele inikwe amandla ku-Tools, Plugin Manager, futhi uma ingasebenzi, hlola Hlela, Izintandokazi ze-Plugin 🙂
Ngidinga ukufunda futhi uthisha onjengawe ngidinga iCuba
Cishe iminyaka eyishumi ngemuva kokushicilelwa nokuholwa nosizo kusenenani
Ngibonga kakhulu! Kungisize kakhulu